मोदीको सुरक्षामा किन देखियो खतरा ? « Asia Sanchar : Nepal News Live
२६ पुष २०७८, सोमबार १४:४८
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्वको कडा सुरक्षा घेरा भित्रको सुचिमा अगाडि नै छन्। तर पनि उनलाई सुरक्षामा देखिएको गम्भीर कमजोरीबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा उच्च स्तरीय समिति गठन हुने भएको छ।
यसैसाता प्रधानमन्त्री मोदी सवार गाडी पन्जाबको फेरोजपुरको एउटा फ्लाइओभरमा झन्डै २० मिनेट फसेको थियो। किसानहरुको प्रदर्शनका कारण फसेपछि प्रधानमन्त्री पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा सहभागी नभई बीच बाटोबाट फर्किएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सवारी सुरक्षामा कमजोरी देखिएपछि पन्जाबका सुरक्षा अधिकारी विवादमा तानिएका थिए । सोही विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा उजुरी समेत परेको थियो । शुक्रबार मात्र सर्वोच्चले पन्जाबका रजिष्टार जनरल र हरियाणा उच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा देखिएको ‘ठूलो सुरक्षा खतरा’ का सम्बन्धमा रेकर्ड सार्वजनिक गर्न हरियाणा उच्च अदालतलाई निर्देशन दिएको थियो।
भारतीय रक्षाध्यक्ष रावतको मृत्युमा कसरी जोडियो चीनमा नाम ? ग्लोबल टाइम्स पनि रिसायो
चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिन रावतको मृत्युपछि पाकिस्तानी सेनाले के भन्यो ?